Ụfọdụ ihe ọmụma nke ikuku oxygen generator ume
Ihe kpatara ịhọrọ HRF
Igwe na-eme akwa spunbond anaghị kpara akpa
Masks film mbukota, igbe mpịachi, mbukota na akara mmepụta Line
Igwe sterlizing UV maka ihe mkpuchi
Igwe na-eme akwa agbaze agbaze
Igwe na-eme akwa spunbond (igwe anaghị kpara akwa)
Spunlace igwe anaghị kpara akpa
SMS ákwà mmepụta akara
otu S na-abụghị kpara akwa na-eme igwe
SS na-abụghị kpara akwa eme igwe
Akara mmepụta akwa akwa nwa
Igwe ihe eji eme uwe mkpuchi nwere ike iwepu
Igwe mkpuchi akpụkpọ ụkwụ
Usoro ọrụ nkeikuku oxygen generator umeA na-emecha ya site na onye na-ahụ maka mmemme nke na-achịkwa valves solenoid pilot nke nwere ọnọdụ ise nke abụọ, mgbe ahụ, valves solenoid na-achịkwa oghere na mmechi nke valves pipeline iri nke pneumatic n'otu n'otu.The ise abụọ-okwa ise pilot solenoid valves na-achịkwa iku ume aka ekpe, nha nha na iku ume na-ekwu n'otu n'otu.A na-echekwa oge ntinye aka ekpe, nrụgide nha anya na mmịrị aka nri na njikwa mmemme.Na steeti na-apụ apụ, onye na-anya ụgbọ mmiri nke ọdụ ụgbọ elu ise nke abụọ na-arụ ọrụ ise na-ejikọta ya na ọdụ ụgbọ mmiri mmechi nke valvụ pneumatic pipe.Mgbe usoro ahụ dị na steeti mmịpụta aka ekpe, valvụ solenoid nke na-achịkwa mmịpụta aka ekpe na-enye ume ma na-ejikọ gas na-anya ụgbọ mmiri na oghere nke valvụ aka ekpe, valvụ aka ekpe na iyuzucha valvụ aka nri imeghe valve atọ a wee mezue. usoro mmịpụta aka ekpe mgbe ụlọ elu adsorption ziri ezi na-emebi emebi.
Akpachara anya na arụ ọrụ na iji ndị na-emepụta ikuku oxygen na-emepụta ihe.
1. Gbanwee valvụ na-emezigharị tupu mita eruba na valvụ oxygen mgbe mita na-erugharị dị ka ikuku ikuku na ụda ikuku si dị.Adịghị agbanwe ọnụego eruba na ọchịchọ iji hụ na ọrụ nkịtị nke ụlọ ọrụ oxygen generator.
2. Mmeghe nke valvụ mbata na valvụ oxygen ekwesịghị ịdị ukwuu iji hụ na ịdị ọcha na-emezu ihe ndị a chọrọ.
3. Akwụsịghị valvụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe ka ọ ghara ime ka ọ ghara imetụta ịdị ọcha.
4. Adịla ịkwaga ngwa eletriki na njikwa eletrọnịkị, ma ewepụla valvụ pneumatic pipe.
5. Ndị na-arụ ọrụ kwesịrị ịlele mgbe niile nlele nrụgide anọ na ikuku oxygen na-emepụta ihe ma jiri mgbanwe nrụgide dị ka ihe ndekọ kwa ụbọchị iji nyochaa ọdịda akụrụngwa.
6. Na-eleba anya mgbe niile nrụgide nkwụsị, ihe ngosi mita na-asọpụta na ịdị ọcha oxygen iji tụnyere ụkpụrụ ibe arụmọrụ ma dozie nsogbu na oge.
7. Nọgide na-enwe compressor, onye na-ehicha ikuku na nzacha nke ikuku oxygen na-emepụta ihe dị ka teknụzụ chọrọ iji hụ na ikuku dị mma.Na Compressor na igwe nkụ ga-enyocha ma ọ dịkarịa ala ugboro ugboro n'afọ, a ga-edochi akụkụ ndị na-eyi ya n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ mmezi akụrụngwa, na ihe nzacha nke kwesịrị ịrụzi ga-edochi anya ozugbo.
8. Mgbe akụrụngwa na-emebiga ihe ókè, a ghaghị ebipụ ikuku (ihe nrịbama gas tank na-egosi efu) ma bepụ ike maka ịmegharị.
9. Mezue akwụkwọ ndekọ kwa ụbọchị.
Gịnị bụ nkịtị ọnọdụ ọrụ nke ụlọ ọrụ oxygen generator?
1. The ike egosi ìhè na-na, na aka ekpe suction, hà nrụgide na nri mmịpụta egosi ọkụ cyclically, na-egosi oxygen ime usoro.
2. Mgbe ekpe mmiri egosi ìhè nkeikuku oxygen generator umena-aga n'ihu, nrụgide nke ụlọ elu adsorption aka ekpe na-eji nwayọọ nwayọọ na-ebili site na nrụgide nhata ruo elu mgbe a na-eme ka nrụgide ahụ dịkwuo elu, ebe nrụgide nke ụlọ elu mgbasa ozi ziri ezi ji nwayọọ nwayọọ na-adaba na efu site na nrụgide nha mgbe a na-eme ka nrụgide dị nhata.Mgbe ọkụ egosi nha nhata, nrụgide nke ụlọ elu adsorption aka ekpe na aka nri ga-eji nwayọọ nwayọọ rute nguzozi nke otu elu na otu ala.
3. Mgbe ihe ngosi mmịpụta ziri ezi na-enwu, nrụgide nke ụlọ elu nke ziri ezi na-eji nwayọọ nwayọọ na-ebili site na nha nhata ruo elu mgbe a na-eme ka nrụgide ahụ dịkwuo elu, ebe nrụgide nke ụlọ elu adsorption aka ekpe na-eji nwayọọ nwayọọ na-ebelata site na nguzozi nrụgide na efu mgbe. a na-ahazi nrụgide.4. Nrụgide ikuku oxygen na-egosi na nrụgide gas bụ ihe nkịtị, na nrụgide ahụ ga-agbanwe ntakịrị n'oge eji, ma mgbanwe ahụ ekwesịghị ịdị ukwuu.
5. The eruba egosi nke eruba mita nke mmepụta oxygen generator kwesịrị isi ike, na fluctuation ekwesịghị ịbụ oke ibu.Uru ngosi nke mita eruba ekwesịghị ịdị ukwuu karịa mmepụta gas nke akụrụngwa oxygen.
6. Ihe ngosi nke mita oxygen nke ikuku oxygen na-emepụta ihe na-emepụta ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị ọkwa dị ọcha nke ngwá ọrụ oxygen, na enwere ike inwe ntakịrị mgbanwe, ma mgbanwe ahụ ekwesịghị ịdị ukwuu.
Oge nzipu: Feb-09-2022